Qaarad Dhan Oo Ku Dhawaatay”Aakhiru Saac” ..Arag Waxa Dhici Kara | Xaqiiqonews
Qaarad Dhan Oo Ku Dhawaatay”Aakhiru Saac” ..Arag Waxa Dhici Kara
Kooxo baarayaal ah ayaa soo saaray digniin ay ugu magac dareen “Aakhiru Saac” iyagoo ka digay biyo la’aan baahsan oo looga cabsi qabo in ay saameyso qaarad dhameystiran.
Wargeyksa “Daily mail” ayaa warbixin dheer ka qoray daraasad halis oo ay diyaarisay jaamacadda Kanabra ee Australia, daraasadda ay ka digeysa in qaaradda Astureeliya ay ku dhawadahay “aakhiru Saac” , waxaan dhaw in la waayo xitaa hal dhibic biyo ah oo ku habboon cabitaan.
Astureeliya ayaa wajaheysa biyo la’aan baahsan iyo abaaro darram kuwaasi oo ka dhashay isbadalka cimilada aduunka.
Daraasadda ayaa intaasi u dartay in Asturaaliya xilligan lagu tilmaami karo qaaradda ugu qalalan dunida oo dhan.
Sidoo Kale AqriNASA Oo Dadka Shaki Ku Abuurtay..Burbur Soo Dhaw
Barfesoor Greg Leslie, oo ah maamulaha machadka caalamiga biyaha ee jaamacadda New South Wales, ayaa yiri “inkastoo ay jirto roob yari, waa in aan ka faa’ideysanaa biyaha aan hadda heli karno”.
Isagoo intaasi ku daray “Dhibaatada jirta waxa ay tahay, warshadaha Ka shaqeeya Magaalada Sydney xitaa awood uma lahan in biyihii la isticmaalay dib u sifeeyaan oo ay ka dhigaan kuwa ku haboon cibitaanka”.